Jajjabeenya Archives - Ibsaa Jireenyaa
April 22, 2017 sammubani 4 comments
Akkuma torbaan darbee eerre fedhii lubbuu hordofuun miidhaa baay’ee fida. Namni tokko fedhii lubbuu hordofuu yookiin hordofuu dhiisu isaa akkamitti beekaa? Yeroo baay’ee namtichi fedhii lubbuu hordofuu, yommuu gocha fedhiin isaa itti ajajju raawwatu fedhii lubbuu hordofuu hin beeku. Kan inni beeku yommuu miidhaa wanta raawwate sanii arguudha. Read more
“Fedhii (hawaa) jechuun uumaman wanta lubbuu ta’utti dabuudha. Dabiinsi kuni ilma namaa keessatti kan uumameedha akka horteen isaa itti fufufi. Osoo nyaatatti, dhugaatittii fi fuudha heerumatti dabiinsi (fedhiin) jiraachu baate, silaa nyaanni, dhugaatinii fi fuudhaa heerumni hin jiru türe. Fedhiin guutumaan guututti wanta faarfamus miti akkasumas guutumaan guututti wanta balaalefatamus miti. Fedhiin ilma namaa kan balaalefatamu ykn jibbamuu yommuu daangaa darbeedha.” Read more
June 8, 2016 Sammubani 3 comments